Mgbe nghọta doro anya bara uru - EGO NA-EKWU
Mgbe nghọta pụtara ihe bara uru
AROAKU NA UBAJob na-enye
Ka anyị na-abanye ọkara nke abụọ nke nkeji nke atọ a nke 2020, ụwa ọrụ arụtụbeghị ụdị egwu dị otu a, na-ekpochapụ amụma niile maka afọ kachasị njọ na akụnụba ụwa. N'agbata nsogbu akụ na ụba na nsogbu ahụike, ọtụtụ ụlọ ọrụ emezigharịrị ụzọ ha si achị ahịa n'agbanyeghị ahịa na-agbanwe agbanwe. Ọ bụ na gburugburu ebe a ka ndị gụsịrị akwụkwọ na-eto eto ma ọ bụ ndị na-achọgharị ọrụ na-achọ ọrụ ga-egosipụta nka iji weghara uche nke onye na-ewe ndị ọrụ na-anata karịa CV karịa ka ọ dị na mbụ. Etu ị ga - esi pụta ma gosipụta obere obere ihe ga - eme ihe dị iche?
Akwụkwọ ozi banyere vitamin
Ihe kariri mmega ahụ a na-eme, akwụkwọ ozi mkpuchi gị bụ ebe mbụ ụlọ ọrụ na onye na-achọ ọrụ na-akpọtụrụ. Ọ na - enye ike n’ihe niile CV gị na - enweghị ike ịtụgharị karịa akụrụngwa gị ma ọ bụ agụmakwụkwọ gị. Ọ na - achọpụta ọnọdụ gị, sụgharịa ụkpụrụ ndị onye na - ewe ihe n'ọrụ na - achọkarị. Nhazi ya choro ihe omuma nke gha eme gi ihe puru iche maka profaịlụ nke kacha dikwa nma. Ọ bụghị naanị ajụjụ banyere ikwu banyere nghọta gị banyere ahịa nke ụlọ ọrụ ezubere iche na-arụ ọrụ, mana ọtụtụ ihe ndị ọzọ: ịkekọrịta ọhụụ ya, ịghọta DNA ya.
Eric KENKOLLA, onye ego dijitalụ - CAMEROON CEO
Nzuzo nke akara anya
Ọ bụ ezie na ọnụ ọgụgụ na-abawanye ụba nke ụlọ ọrụ na-ekwurịta okwu na ntanetị site na nyiwe raara onwe ya nye ma ọ bụ ihe banyere gburugburu, ugbu a enwere ohere na-eme ka ndị na-achọ ọrụ nwee nghọta ka mma banyere ụdị ndị ọzọ dị iche iche ezubere iche, dịka GoWork.fr. Ebe nchekwa data ga - ekwu maka ndị were ọrụ, GoWork.fr na - enye ndị ọrụ ụlọ ọrụ na - eme ka ndị na - achọ ọrụ chọpụta ihe ndị ọzọ gbasara ụlọ ọrụ ha na - etinye n'ọrụ na mpaghara ha. Nyocha n'okpuru akara nke anonym na-eme ihe dị iche ma gosipụta ụlọ ọrụ ahụ iche. GoWork.fr bu uzo kachasi mma maka ichikota njikwa na ndi oru, n’ikpeazu ike inyeghachi ihe omuma banyere imeghari ihe oma na onodu oru. Ugbu a na kọntinenti isii, ọnụ ụzọ a na - emepe ụzọ maka oge ọhụụ na ndụ ụlọ ọrụ n'ihi usoro doro anya nke ndị ọrụ kwuru site n'aka iri puku kwuru iri puku ụlọ ọrụ ndị dị na France.
Ọfụma ka akwadoro
Talent nke mpaghara Corsica, nkeOccitanie ou Akwa Est mee ka mpaghara ha biri ndụ dị iche, ọ bụghị n'ọsọ mmụọ maka echiche maka ya karịa site na imepụta gburugburu ahụmịhe ha jikọtara ọnụ nke ozi na-eme ka o kwe omume ịghọta ihe ịma aka ndị ọrụ na-achọ. Ya mere, ụdị French nke GoWork.fr portal na-enye ohere maka ozi dị mkpa n'oge nsogbu akụ na ụba mgbe olileanya niile na-aga ụkwụ na mgbapụta nwayọ. Nweta echiche banyere onye were gị n'ọrụ site na ịnakọta ọdịdị nke usoro ya n'ihi ọdịnaya nke ndị ga - abụ ndị ọrụ ibe gị echi. Newwa ohuru gha emeghere gị ozi, ọ dị gị n’aka ịmara etu ị ga-esi ruo ebe ahụ. Họzie ya, họrọ ụwa kacha gị nso, dịrị njikere ma gaa.
Ọgbakọ ndị okenye nke Magistracy: Adreesị zuru ezu nke Onye Isi Ala
Rọshịa: Clinton Njié na-amalite oge ya nke ọma